မီးစမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာ, Flammable စမ်းသပ်သူ - Skyline
DONGGUAN Skyline စက်မှု CO ။ , LTD မှ။
Applications ကိုအားဖြင့် Rearch
ဝါယာကြိုး & Cable ကို
နမူနာ၏အရင်းအမြစ်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ Cone Calorimeter Cone Calorimeter အစီအမံများ ISO5660 Cone Calorimeter ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစာရွက်စာတမ်းသည်အပူဖြန့်ချိကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ဖြန့်ချိမှုနှုန်း (HRR), မီးခိုးလွှတ်ပေးရန်, စက်နှိုးချိန်, အောက်စီဂျင်စားသုံးမှု, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့မျိုးဆက်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကိုအပူ conical အပူပေး။
လူပျိုမီးရှို့ခံရသောအရာဝတ္ထု Flammable စမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာ
အဆိုပါလူပျိုမီးရှို့ခံရသောအရာဝတ္ထုအဆိုပါလူပျိုမီးရှို့ခံရသောအရာဝတ္ထု (SBI) ၏ hood ကိုကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်စုဆောင်းခြင်းသံမဏိဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူလူပျိုမီးရှို့ခံရသောအရာဝတ္ထု Flammable စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာ, အထိတွေ့သည့်အခါ (အထပ်ဖယ်ထုတ်ပြီး) တည်ဆောက်ခြင်းထုတ်ကုန်များ၏မီးအပြုအမူဖို့တုံ့ပြန်မှုအဆုံးအဖြတ်ဘို့စမ်းသပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ခုတည်းမီးလောင်ရာကို item (ပရိုပိန်းနှင့်အတူထောက်ပံ့နေတဲ့သဲ-box ကို burner) ကအပူတိုက်ခိုက်။ အဆိုပါနမူနာအနေနဲ့အိပ်ဇော system ကိုအောက်တစ်ဘောင်အတွင်းနေရာချထားသောပုံဖမ်းတွန်းလှည်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါ burner ဖို့နမူနာများ၏တုံ့ပြန်မှုရှိ Instrumentation and အမြင်အာရုံစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အပူနှင့်မီးခိုးလွှတ်ပေးနှုန်းထားများရရှိသောတိုင်းတာကြသည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများလေ့လာရေးအားဖြင့်အကဲဖြတ်နေကြသည်။
စည်း Cable ကိုဒေါင်လိုက် Flame ဟာစမ်းသပ်သူ
အဆိုပါစည်း Cable ကိုဒေါင်လိုက် Flame ဟာစမ်းသပ်သူစည်း Cable ကိုဒေါင်လိုက် Flame ဟာ Spread စမ်းသပ်သူ IEC 60332-3-10 (Category: တစ်ဦးက ~: D) စံချိန်စံညွှန်းများဘက်ကလိုက်လျောညီထွေတဲ့စီးရီးဖြစ်ပါသည်၏သံမဏိစမ်းသပ်ခြင်း Box ကိုကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်နှင့်အတူစည်း Cable ကိုဒေါင်လိုက် Flame ဟာစမ်းသပ်သူ။ အဆိုပါစမ်းသပ်တိုင်းတာမယ့်သတ်မှတ်ပမာဏ၏တစ်ဦးအခန်းထဲသို့လေထု၏လူတယောက်ငွေပမာဏကိုထောက်ပံ့နေစဉ်စံစက်နှိုးအရင်းအမြစ်သုံးပြီးအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်တာတော့ဒေါင်လိုက် cable သို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးမှဒေါင်လိုက်မီးလျှံများတိုးချဲ့။ 20 ဒီဂရီထောင့်အားဖြင့်ချိန်ညှိနေသည် burner cable ကိုဒေါင်လိုက်မီးလျှံပျံ့နှံ့စမ်းသပ်သူများ bunched လျှင်ထို့အပြင်ကြောင့်ကို IEEE 383 (IEEE 1202) စံအောက်မှာအတိုင်းအတာရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ဒါပေါ်အပူဖြန့်ချိ Facility ပူးတွဲလျှင်, က HRR (အပူဖြန့်ချိနှုန်း) အဖြစ်မီးဒိုင်းနမစ်တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ (ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမီးခိုး) နှင့်။
အဆောက်အဦးပစ္စည်းမီးခိုး Density စမ်းသပ်သူ
ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်မီးခိုးသိပ်သည်းဆ tester ပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အမေရိကန် Rohm Haas ကုမ္ပဏီကတီထွင်နေသည်စမ်းသပ်သူအဆောက်အဦးပစ္စည်းမီးခိုးသိပ်သည်းဆ ASTM D2843 ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်ရေးဖိုင်သည်နှင့်အညီစမ်းသပ်သူအဆောက်အဦးပစ္စည်းမီးခိုး Density ။ ဒါဟာ ASTM D2843 စံနှင့်အညီ 1970 ခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည်။ ၎င်း၏သီအိုရီအခြေခံကိုမီးရှို့ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မီးခိုးတိုက်ရိုက်မီးလျှံအားဖြင့်ထိခိုက်သည်နှင့်အလင်းထိုးဖောက်မှုပစ္စည်းများလည်းမီးလောင်ပြီးနောက်ကာကှယျသည်ကြောင်းကို Billumber ၏တရားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပိုလျှံမှုနှုန်းထို့နောက်မီးခိုးသိပ်သည်းဆတန်ဖိုး (SDR) ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပို. ပို. applications များ, PVC ထည်၏အခိုးအငွေ့သိပ်သည်းဆစစ်ဆေးမှုအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းမော်တော်ယာဉ်အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများကို၏အခိုးအငွေ့သိပ်သည်းဆစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်များအတွက်အမျိုးသားရေးစံနှုန်း GB ကို 8624 လွန်ပြီ။
DONGGUAN Skyline စက်မှု CO ။ , LTD မှ။ , ဒီဇိုင်းအတွက်တောင်တရုတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မီးသတ်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်စမ်းသပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဘုတ်အဖွဲ့အကွာအဝေး၏ဝန်ဆောင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်အရည်အသွေးမြင့်မီးသတ်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအဘို့အပြည့်စုံကိုစမ်းသပ်ဖြေရှင်းနည်းများ, လေကြောင်း, သံလမ်း, IMO, ပရိဘောဂ, နှင့်ကြေးနန်း & Wired '' စက်မှုလုပ်ငန်းပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကြောင့်မီးမှဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချကိုကူညီဖို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်အမြဲစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကျော်လွန်နှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရည်ညွှန်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်စမ်းသပ်အရှိဆုံး Inspiration အောင်မြင်သောနှင့်အသည်းအသန်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြား 3rd ပါတီဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်နိုင်ငံခြား High-end ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူအထူးသဖြင့် Co-operation အတွင်း, ဆယ်စုနှစ် '' ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် 2008 ခုနှစ်ကတည်းကဒီဇိုင်းနှင့်အသီးအနှံစမ်းသပ်ကိရိယာများမှစတင်ခဲ့ Skyline, သူတို့ကြီးကြပ်မှုနှင့်အကူအညီအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး, ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်စုဆောင်း အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့ဤထူထောင်အသံအခြေခံ။ လူမှုရေးကိစ္စများအက်ဆေး
ကျနော်တို့ SASO, SGS, ဣသရေလအမျိုး၏စံချိန်စံညွှန်း Institution ကို Intertek, BV, TUV, Hasbro, Mattel ၏ရောင်းချသူဖြစ်ကြသည်။ အထက်ခန်း၏ကစားစရာစမ်းသပ်ကိရိယာများနီးပါးကို 100% Skyline ထံမှဝယ်ယူနေကြသည်။ သူတို့ဟာလယ်ကွင်းစမ်းသပ်ကစားစရာအမြင့်ဆုံးစံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျနော်တို့ဂုဏ်ပြုနှင့်၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ဂုဏ်ယူနေကြသည်။
တောက်ပသောကြမ်းခင်း Panel ကိုစမ်းသပ်ခြင်းယန္တရား
NBS Density ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမီးခိုး
နေရပ်လိပ်စာ:3/ က F 2nd အဆောက်အအုံ Minghui စက်မှု Zhongwuwei Niushan Dongcheng ခရိုင် Dongguan, ဂွမ်ဒေါင်း 523128 တရုတ်
E-mail ကို: Info@skylineinstruments.com